lulu: ဟင်းပွဲပေါင်းချုပ် လုံးချင်းထုတ်
at 8:58 AM Labels: အထွေထွေ
ချစ်မောင်နှမများအားလုံး မင်္ဂလာပါရှင်။ ဒီနေ့တော့ မောင်နှမတွေအားလုံးအတွက် အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပေးချင်လို့ပါနော်။
မောင်နှမများ မီးဖိုဆောင်ဝင်ပြီး ဟင်းလျာချက်ပြုတ်တဲ့အခါ အလွယ်တကူ လက်တကမ်းမှာ ထားနိုင်ဖို့၊ အမှတ်တရ အနေနဲ့ သူငယ်ချင်းများကို လက်ဆောင်ပေးနိုင်ဖို့အတွက် မေတ္တာရပ်ဝန်းမီးဖိုဆောင်မှ ဟင်းပွဲများ ကို စုစည်းပြီး ဟင်းပွဲပေါင်းချုပ် စာအုပ်ကို ပီဒီအက်ဖ်ဗားရှင်းဖြင့် ပြုလုပ်ဖြန့်ချိလိုက်ပါပြီနော်။ အောက်ကလင့်ခ်တွေ မှာ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်နော်။
subuueain November 11, 2009 at 10:38 AM
အရမ်းကောင်းတယ် မမလု။ စုစည်းပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ။ မြန်မာနိုင်ငံ အလည်ပြန်လာတဲ့အချိန်ကျ မမလုဆီမှာ ထမင်းလာစားမယ်နော် ကျွေးမှာလားမမ :-)
Thxs so much!!
Moe Cho Thinn November 11, 2009 at 11:24 AM
စာအုပ်ရော ထုတ်ပါသလား။ အမ ၀ယ်ချင်ပါတယ်။ ထုတ်တယ်ဆိုရင် ရန်ကုန်က အမကို စာအုပ်ဆိုင်တွေမှာ ၀ယ်ခိုင်းမလို့ပါ။ အမအတွက် အထူးစပယ်ရှယ် အသုံးဝင်ပါတယ် ညီမရယ်။ အမ လက်စွဲ ဖြစ်မှာ သေချာတယ်။ ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ..
Dearest Lu Lu,
I often check your site and cook my everyday food. Though I have some knowledge about cooking, I don't know how to cook step by step for many recipes and your site help mealot.
Especially, Thank you so much for sharing those traditional food like coconut noodles, "kyay Owe", boiled "sa taw pe","nga pi kaung" n etc which I could make them by myself now, while I am away from Myanmar,after checking your blog.
Again, Thank you so much for your job. And I'd also like to urge to publish your recipe book.
လုလု November 11, 2009 at 5:16 PM
စုဗူးလေးရေ့့  မြန်မာပြည်လာရင်သာ သံချောင်းခေါက်လိုက်နော်။ ပြီးရင် စားချင်တာကို ပြော။ ချက်ကျွေးပါမယ်နော်။
မမိုးချိုရေ့့့  အပြင်မှာ စာအုပ်ကို ပုံနှိပ်ဖို့အတွက် စုံစမ်းနေပါတယ်။ ငွေကြေးအင်အားအခက်အခဲရှိမှာ စိုးတာရော၊ ထုတ်ဝေသူ အခက်အခဲရှိမှာရောအတွက် သူငယ်ချင်းများနှင့် ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်နေဆဲပါ မမ။ အမြဲအားပေးတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။
အမည်မဖော်ပြထားပေမယ့် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း လာရောက်ဖော်ပြသွားတဲ့ မောင်နှမများအားလုံးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။
TD လည်း အစစအရာရာ အဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ ၀မ်းသာတယ်နော်။ အခု စာအုပ်ထွက်ပြီဆိုတော့ ပိုပြီးအဆင်ပြေမယ်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်နော်။
ကျော်ထင် November 11, 2009 at 5:46 PM
Unknown November 11, 2009 at 6:08 PM
Thank you very much ma ma.. This is very very useful for me.. Thanksalot naw...
Unknown November 11, 2009 at 6:16 PM
မမလုရေ။။။။"ရေမုန့်" နဲ့ "မုန့်လင်မယား" လုပ်နည်းလေး အဆင်ပြေရင် ပြောပြပေးပါနော် - စာအုပ်လေးအတွက် ကျေးဇူးအထူးပါရှင့်
Nay Mya Mya Swe November 11, 2009 at 7:37 PM
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ မလုလုက အရမ်း စနစ်ကျတာပဲ။
အရင်က Blog မှာပြေးဖတ်လိုက်
မီးဖိုထဲပြေးလိုက်နဲ့ လုပ်ရတာ။ အခုတော့ Print ထားလိုက်ပြီး ဖီးဖိုထဲထားလို့ ရပြီ.....
CONTACT November 11, 2009 at 8:14 PM
မလုလု နဲ့စီစဉ်သူများအားလုံး ကျေးဇူးပါနော်။ လှပသေသပ်မှုလဲ အရမ်းကောင်း၊
menu တွေကလဲ တမူထူးပြီး စားလို့ ကောင်း၊
တစုတဝေးထဲ ရှာရမခက်တော့တာမို့တအားကောင်း။
rose of sharon November 11, 2009 at 9:17 PM
အဲလိုလေးလုပ်ပေးတာကျေးဇူးနော်... စာအုပ်ထွက်ဖြစ်ရင်ကောင်းမယ်... ဝယ်ပြီးသိမ်းထားချင်လို့
KhinU Khine November 11, 2009 at 11:18 PM
Thank you so much for sharing your recipes. I have following your blog and your recipes. I am in the US and is so nice to check your blog and follow the steps of cooking.
စန္ဒကူး November 12, 2009 at 6:03 AM
ကောင်းရောမမလုလု... အခုတော့စာအုပ်လေး နဲ့ဆိုပိုအဆင်ပြေတယ်..
KhinU Khine November 12, 2009 at 7:29 AM
While looking at your recipes, please may have the recipe for Mont Kywe Thei.
naing November 12, 2009 at 8:24 AM
thanks for ur book.
နွေးနေခြည် November 12, 2009 at 11:40 AM
Khyl November 12, 2009 at 12:28 PM
Shinlay November 12, 2009 at 10:24 PM
မလုရေ... အခုတော့ internet မလိုတော့လို့ 
အချိန်မရွေး၊နေရာမရွေး ချက်ချင်တာတွေ ကြည့်လို့ ရ
နေပြီ။ ဒီနေ့မလုရဲ့ ပဲကြော်ကျွတ်ကျွတ်လေး
လုပ်ပါတယ်။ very good...thanks....
Steve Evergreen November 13, 2009 at 5:58 AM
myat November 13, 2009 at 7:42 AM
thanks u so much..today i will cook tom yum soup according ur book..:P
Thet Htar Khin November 13, 2009 at 8:59 AM
Thank you very much, Ma Lu Lu.
မြရွက်ဝေ November 13, 2009 at 2:08 PM
နောင်လည်း ဟင်းချက်နည်းတွေ အများကြီး ထပ်တင်ပေးပါနော်~ :)
Evy November 13, 2009 at 3:10 PM
Thanks for sharing Ma Lu Lu..
myatlaypan November 14, 2009 at 7:38 AM
အမ အင်္တက် လုလု က မရှိုမူဖစ်ပါ
မယ့်ကိုး November 14, 2009 at 8:21 AM
ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ် အစ်မ။ စာအုပ်အဖြစ်ရော ထုတ်ပါလား။
ချက်နည်း ပြုတ်နည်းတွေကို Online၀ယ်လို့ရတဲ့နေရာ တွေ့ထားတယ်။
I've been reading your blog foralong time. I was very happy when I saw your cooking book.
Thanks you so much for your Say-Da-Hnar.
Dear ma Lu Lu ,,
Thanks for ur cooking book ,, very kind of u !!! u r StAr ****
မိုးကောင်းသူ November 17, 2009 at 7:21 PM
မမလု ရဲ့ ဟင်းပွဲပေါင်းချုပ် ပီဒီအက်ဖ် တစ်ဖိုင်လုံး အလွတ်ကျက်ထားမယ်။ ဒေါင်းလုပ် လုပ်ထားပါပြီ။ ဘလော့ထဲမှာ မွှေနှောက်ထားလို့ ဘယ်ဟင်းချက်ချင်ရင် ဟင်းချက်နည်းကို ဘယ်အထဲဝင်ရှာရမှန်း ပိုမှတ်မိနေတယ်။ ဟင်းချက်နည်းမှန်သမျှတော့ သဘောကျတယ် မမလုရေ။
Unknown November 20, 2009 at 6:44 AM
JanuskieZ November 27, 2009 at 9:30 AM
Naing79 November 28, 2009 at 3:13 PM
Thanks so much for sharing. It is so precious. Thanks again from the bottom of my heart. Best Wishes and Good Luck.
mm thinker December 20, 2009 at 11:26 AM
တပြည်သူ မရွှေထားကို စားချင်တာ ဘာသာပြန်ရှင်းပြရန် အလို့ငှာ ဒေါင်းလုဒ်သွား၏။ ကျေးဇူး ဥပကာရ အထူး။
Unknown September 18, 2014 at 9:11 PM